Shirkii IGAD oo maantay kusoo dhammaaday Addis Ababa, laga soo saaray 25 qodob oo u badan arrimaha Soomaaliya. – Radio Daljir
Addis Ababa, Nov, 25 ? Shirkii madaxda uru goboleedka IGAD ayaa galabtay kusoo dhammaaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, waxaana halkaasi si qoto dheer loogu falan-qeeyay arrimo badan oo quseeyo gobolka, gaar ahaan hawl-galada lagula dagaalamaya kooxda Al-shabaab.
Dalka Soomaaliya shirkaasi waxaa uga qayb-qaatay madaxwayanaha DFKS Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo R/wasaare kuxiggeenka ahna wasiirka difaaca dawladda Soomaaliya mudane Xuseen Carab Ciise, iyo madax kale, waxaana halkaasi khudbado kale duwan ka soo jeediyay madaxda gobolka oo uu ugu horeeyo raysal-wasaaraha Ethopia Males, oo si qoto dheer uga hadlay sida ay Ethiopia uga go?antahay la dagaanka kooxda Al-shabaab, iyo hawl-galka AMISOM ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya.
Shirkaan galabtay Addis ugu soo gabagaboobay madaxda IGAD ayaa ah shirkii 19-aad ee madaxda wadamada ku jira IGAD, waxaana sidoo kale lagu soo qaaday shirka eedayntii Kenya ay usoo jeedisay xukuumadda Asmara ee ku aadanayd taakulaynta kooxda Al-shabaab.
Madaxda IGAD ayaa masuuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya, iyo madaxda maamulada ka jira Soomaaliya waxay ugu baaqeen inay sida ugu dhaqsaha badan u hirgaliyaan barnaamijka ka guurida marxalada kumeel-gaarka.
Ugu dambeyntii Madaxda IGAD shirkooda waxay baaq ugu jeediyeen beesha caalamka, kaasi oo ku aadan sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen hawl-galka laguala dagaalamayo kooxda Al-shabaab, isla markaana loo kordhin lahaa tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.